Rooble Oo Sheegay Inay Shir Isugu Imaan Doonaan M/Goboleedyada | Wardoon
Home Somali News Rooble Oo Sheegay Inay Shir Isugu Imaan Doonaan M/Goboleedyada
Rooble Oo Sheegay Inay Shir Isugu Imaan Doonaan M/Goboleedyada
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta daah-furay shirka iskaashiga Soomaaliya & saaxiibada caalamka ayaa ka warbixiyey dadaalada ay wado xukuumadiisa ee ku aadan doorashada soo socota ee isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Rooble ayaa marka hore shaaca ka qaaday in doorashada ay ku dhici doonto waqtigii loo asteeyey, si looga baaqsado inuu yimaado dib u dhac.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu bilaabi wada-tashiyo guud oo ku aadan doorashada, islamarkaana uu safaro kala duwan ku tegi doono magaalooyinka Garowe, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb, si xal waara looga gaar tabashada qaar ee maamul goboleedyada dalka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale intaasi ku daray in todobaadka soo socda uu Muqdisho ka furmi doono shir u dhexeeyo madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada, kaas oo looga arrinsanayo doorashada.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkeysaneysa qabashada doorashada, iyada oo weli ay halkeedii tahay walaaca iyo tabashada ay muujinayaan, Jubbaland, Puntland, guddoomiyaha aqalka sare iyo musharraxiinta ka qeyb-galaya doorashada soo socota.
Si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan, iyada oo xukuumadda Soomaaliya ay qorsheyneyso in la bilaabo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare ee Soomaaliya.
Previous articleFarmaajo oo diiday qodobo ay hor-dhigeen bulshada rayidka
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gobolka Tigrayga
Ganacsade Bashiir Maxamed Gaboobe oo meedkiisa lahelay